Israa’elii fi Hamaas Walii Galtee Lola Dhaabinsaa Tolfatan
Lola dhaabinsi Israa’elii fi Hamaas gidduu har’a ganama barii sa’a saddeetitti kan jalqabame yoo ta’u Israa’elii fi Gaazaa dhaaf sabatiinsi salphaa hin jedhamin ta’eefii jira. Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis Joo Baayiden, muummichi ministeeraa Israa’el Benjamin Natanyaahuu kamisa kaleessaa haal duree tokko malee Hamaas waliin walii galtee lola dhaabinsaa irra ga’uuf walii galuu isaanii naaf himaniiru jedhan.
Ministriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Bliinken, fuula Tweeterii isaanii irratti, guyyoota itti aanan keessa gama naannoo sanaatti imaluu dhaan hoogganoota Israa’elii fi Faalisxiin waliin illee mari’achuuf akka jiran ibsaniiru.
Israa’el Faalisxiinota Jerusaaleem irratti dhiittaa mirga namaa raawwatte jechuun Hamaas erga Caamsaa 10 qabee gara Israa’eliti rookkeetii gurguggisaa turte.
Prezidaantiin Yunaayitid Isteetis, dubbiif wal barbaaduu dhaabsisuuf mul’inatti utuu hin taane, bulchiinsi isaanii qaama tataaffii dimokraasummaa kan ta’e guyyoottan 11 darban keessa yeroo ja’a Natanyaahuu waliin dubbachuu isaanii ibsaniiru.
Gama biraan Baayiden prezidaantii Masrii Abdel-Fattah el-Sisi waliin kamisa kaleessaa mari’atanii jiran. Haasaa TVn darbeef daqiiqaa afuruuf tureen Baayiden, prezidaanti El-Sissi fi angawoota Masrii gameeyyii kanneen diplomaasummaa keessatti qooda ol aanaa qabaatan nan galateeffadha jedhan.